Wzọ 4 gị Ngosipụta Management Strategy - ma ọ bụ Enweghi ya - bụ igbu oge, ego na azụmaahịa | Martech Zone
Wzọ 4 Gị Ngosipụta Management Strategy - ma ọ bụ Enweghi ya - bụ igbu oge, ego na azụmaahịa
Tọzdee, Disemba 15, 2015 Wednesday, December 16, 2015 AlexAndra Ontra
Nwere ike inyere m aka ijikọ ihe ngosi a? Nzukọ m n'otu awa. Enweghị m ike ịhụ slide ahụ.
Nke ahụ bụ ihe mmịfe na-ezighi ezi.
$ #! * Nke ahụ bụ oche na-ezighi ezi.
Adaala? Mgbe ahụ, B NOTGH using iji usoro njikwa ihe ngosi dị irè. Na, n'ihi ya, ị na-efufu oge, akụrụngwa yana, karịa ihe niile, azụmaahịa. Njikwa ngosi na-eme ka a mata na a na-ezi ozi ziri ezi n'oge kachasị dị oke egwu - mgbe onye ahịa na-agwa onye ahịa ya okwu. Kedu ihe, ma ọ bụ na ọ bụghị, na-eme n'oge nzukọ ahụ na-emetụta akara ala. Ọ bụ mmeri ma ọ bụ ida.
Ihe ngosi ngosi na-arụ ọrụ iji nweta mmeri. Site na nkọwa, ọ bụ ụzọ esi emepụta, ịchekwa, chee, ịkekọrịta, mmelite na nsuso faịlụ niile eji eme ihe ngosi. Na omume, njikwa njikwa na-eme ka akara na njikwa ozi maka ire ahịa, niile na-eme ya ngwa ngwa ma dịkwa mfe maka Ahịa ịmepụta na ịkekọrịta ọdịnaya ngosi.
Usoro nhazi ihe ngosi dị mma ga - enyere gị aka izere mmejọ ndị a - na - eme ka onye ọ bụla nọ na otu gị, gafee ọrụ, na - arụpụta ihe ma na - arụ ọrụ nke ọma iji mezuo ebumnuche ha.
Were ya na ndị ahịa na-ama ebe ha ga-ahụ ọdịnaya ha. - Ọ nọla na S: Drivegbọala na ụfọdụ Akpọrọ Ahịa folda, na Sharepoint, ma ọ bụ ikekwe ezigara ya na email, yana nnukwu ọkwa. A na-eli faịlị ahụ na netwọkụ, na ebe ọrụ ma ọ bụ na Igbe mbata, nke enweghị nke nwere njiri mara ọchụchọ ka ibugharị ma chọpụta na otu slide na nde. Onweghi nke n’enye oru obula n’ime imeputa ma obu idozi faili ohuru maka nzube nzuko ohuru. Nhazi ngosi na-etinye ọdịnaya kachasị dị n'ihu onye na-ere ahịa. Ọ ana achi achi ozi nnabata.
Were ya na onye obula na-ekwenye ekwenye, ihe di na oge a. - A gwara ya onye ọ bụla, ma eleghị anya na email, ndepụta Chatter, ma ọ bụ na nzukọ ọnọdụ, na enwere ụdị ọhụụ ọhụrụ, nke ka mma, nke akwadoro. O di nwute, mmadu bu ihe okike. Uzo a na-ahukari maka onye na-ere ahia bu iwere faịlị ụnyaahụ nke na-anọdụ na desktọọpụ ya ma jikwa ya. E kwuwerị, ọ maara ọdịnaya ahụ nke ọma, ọ dịkwa mma maka nzukọ ikpeazụ. Ngwọta njikwa ngosi ziri ezi ga-eme ka ọ dịrị onye ahịa ahụ mfe ịmepụta oche ọhụrụ maka nzukọ ya ọzọ, dịka ọ ga-abụrịrị iji ụfọdụ oche ochie nke na-anọdụ na desktọọpụ ya. Ọ na-azọpụta oge.
Agaghị agwa ndị ahịa okwu. - Ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-arụ ọrụ rue otu ebumnuche, Ahịa na Ahịa dị iche iche. Ezigbo onye na-ere ahịa na-anwa imezu ọnụọgụ ha, ma weta ego. Ezigbo onye na-ere ahịa na-ewu ụlọ nrụpụta ahịa site na ngwaahịa / ọrụ na ọrụ ụlọ ọrụ na izi ozi. Otu dị mkpụmkpụ, nke ọzọ dị ogologo. Ha abụọ dị oke mkpa na ịga nke ọma ụlọ ọrụ. N'iji atụmatụ mmekọrịta azụmaahịa, usoro njikwa ngosi ga-eme ka Ahịa na Ahịa rụọ ọrụ, yabụ onye ọ bụla nwere ike ịkekọrịta ihe ọmụma na-enweghị atụ, n'oge, ma mezie ya. Ọ bụ mmeri-mmeri.
Agaghị emeso ihe ngosi dị ka mmewere na ngwakọta nkwukọrịta. -
Ndị na-ere ahịa na-emefu ọtụtụ ijeri dollar na-emepụta akara ngosi zuru oke, ịmepụta ọnọdụ, ịmepụta weebụsaịtị, broshuọ, ntụpọ TV na mgbasa ozi ndị ọzọ na nkwa, mana ngosi ahịa bụ echiche mgbe emechara. Kpoo logo na ezigbo ndabere na ndebiri PowerPoint na Gaa, Gaa, Gaa ell Ree! Ihe onye na-ere ahia na-ekwu, yana otu ha si ekwu ya, bụ ihe dị iche na mmeri na ida n’azụmahịa. Ihe ngosi a na-ere bụ mpempe akwụkwọ nkwekọrịta; ọ bụ ya mmewere na nkwukọrịta mix, na-ekwesịghị-emeso dị ka ihe mgbe-echiche. Okwesiri ilebara anya karia ahia na ahia.
Ngosipụta njikwa na-egosi na akụrụngwa kachasị mma nke ụlọ ọrụ ahụ dị na mkpịsị aka nke mkpịsị aka onye ọ bụla, yana na onye ọ bụla na-ere ahịa na-enweta akara aka na ebumnuche ha. Ọ bụ maka ịmepụta ozi ahịa ziri ezi, ma hụ na ndị ahịa nwere ike mụta nwa ma gbanwee nke ahụ maka nzukọ ha n'otu n'otu, n'ime nkeji - ọ bụghị awa ma ọ bụghị ụbọchị. Site na ibuli ihe ngosi na usoro nke imepụta ihe ngosi ndị ahụ na ngwakọta ahịa, ụlọ ọrụ na-ebuli itinye ego azụmaahịa ya, ma tinye ya na akara ala.
Onwuchekwa bụ sistemụ njikwa faịlụ nke ire ahịa na ire ahịa nwere ike iji mepụta, kekọrịta, ma jigide ihe ngosi n'ofe nzukọ gị.
Tags: powerpointngosinjikwa ihe ngosi
AlexAnndra Ontra bụ ngalaba-nchoputa na president nke Onwuchekwa, na-na-ina akwụkwọ management ngwọta maka ike n'ihu. New York City Shufflrr bụ ọsụ ụzọ nke Ngosipụta Ngosipụta. Tọrọ ntọala na 2014 site na James na AlexAnndra Ontra, otu nwanne-nwanne nwanyị nwere ihe karịrị afọ iri atọ nke ahụmịhe n'ịzụlite sọftụwia njikwa njikwa, Shufflrr na-enyere ụlọ ọrụ na ndị ọrụ n'otu n'otu aka ijikwa, kesaa ma melite ọdịnaya ha, na-echekwa ha oge na ego.